Volana mirehareha mahatsiravina: 'Dracula' sy ny tsy fahampian'ny tsy fetezan'ny Bram Stoker
Home Boky mahatsiravinaFiction Volana mirehareha mahatsiravina: 'Dracula' sy ny tsy fahampian'ny tsy fetezan'ny Bram Stoker
FictionBoky mahatsiravinaVaovao Mahafaly Fialam-bolyHorohoro LGBTQ
by Waylon Jordan Jona 9, 2021
nosoratan'i Waylon Jordan Jona 9, 2021
Indraindray mandritra ny Pride Month ao iHorror dia fantatro fa tsy hiraharaha ahy tanteraka ny olona. Avy eo dia misy fotoana handrararako ny foy sy hiomanana amin'ny lamosina aoriana. Rehefa manoratra ny lohatenin'ity lahatsoratra ity aho Dracula– Iray amin'ireo tantarako ankafiziko hatrizay - tsara, andao lazaina fotsiny fa ny fahitana an'i Kurt Russell sy Billy Baldwin dia mandihy ao an-tsaiko.
Ka izao no mandeha…
Tao anatin'ny 125 taona lasa izay Dracula dia navoaka voalohany, efa nianarantsika zavatra betsaka momba ny tenantsika sy momba ilay lehilahy nanoratra angamba ilay tantara an-tsary vampira nalaza indrindra tamin'ny fotoana rehetra, ary ny marina dia, Bram Stoker dia olona nandany ny fiainany tamin'ny naha olon-dehibe azy. .
Fampirantiana A: Walt Whitman
Rehefa efatra amby roapolo taona izy rehetra, dia namorona izay mety ho iray amin'ireo litera mafana indrindra novakiako manokana ho an'ny poeta amerikana Walt Whitman ny tanora Stoker. Nanomboka toy izao:
Raha ianao no lehilahy itondrako anao ho tianao dia azonao ity taratasy ity. Raha tsy ianao dia tsy raharahako na tianao izany na tsia ary angataho fotsiny ianao mba hametraka azy ao anaty afo nefa tsy mamaky lavitra intsony. Fa mino aho fa ho tianao izany. Heveriko fa tsy misy lehilahy velona, ​​na dia ianao izay mihoatra ny fitsarana an-tendrony an'ny kilasin'ny lehilahy kely saina, izay tsy te-hahazo taratasy avy amin'ny tovolahy tanora iray, vahiny iray, manerana an'izao tontolo izao - lehilahy iray miaina anaty rivo-piainana manavakavaka ny fahamarinana henonao sy ny fomba fihiranao azy.
Stoker dia nanohy niresaka ny faniriany hiresaka amin'i Whitman toy ny ataon'ireo poety, niantso azy ho "tompo", ary nilaza fa nialona izy ary toa natahotra ny fahalalahana nitondran'ny mpanoratra zokiny ny fiainany. Ary farany dia vita izao fomba izao:
Tena mamy izany zavatra izany ho an'ny lehilahy salama matanjaka amin'ny mason'ny vehivavy sy ny fanirian'ny zaza iray hahatsapa fa afaka miresaka amin'ny lehilahy iray mety ho tonga izy raha maniry ny rainy, ary ny rahalahiny sy ny vadiny ho an'ny fanahiny. Heveriko fa tsy hihomehezana ianao, Walt Whitman, na hanamavo ahy, fa amin'ny hetsika rehetra dia misaotra anao aho noho ny fitiavanao sy ny fiaraha-miory nomenao ahy miaraka amin'ny karazany.
Tsy fahitana sary an-tsaina ny fandinihana izay mety ho tian'i Stoker holazaina tamin'ny hoe «karazana ahy». Na izany aza, na izany aza, tsy azony natao ny nilaza ny teny mivantana, nandihy manodidina azy ireo.
Azonao atao ny mamaky ny litera feno sy ny fifanakalozan-kevitra bebe kokoa amin'ny MANDRAKARIVA. Whitman, raha ny marina, dia namaly ilay tovolahy, ary nanomboka taratasy izay hitohy am-polony taona amina endrika na endrika hafa. Ny amin'i Stoker dia nilaza tamin'ny namany Horace Traubel izy:
Zaza tanora izy. [A] ny fandoroana ny epistily na tsia — tsy tonga tao an-tsaiko mihitsy ny hanao na inona na inona mihitsy: inona no tsy nampaninona ahy na izy akaiky na tsy mety? vaovao izy, tsio-drivotra, irlandey: izany no vidiny aloa amin'ny fidirana-ary ampy: tongasoa izy!
Taona maro taty aoriana dia nanana fotoana nihaona tamin'ny sampiny imbetsaka i Stoker. Hoy izy momba an'i Whitman:
Nahita azy aho izay rehetra nofinofisiko, na iriko taminy: be saina, be fijery, mandefitra hatramin'ny farany; tonga nofo mangoraka; fahatakarana amin'ny fahitana izay toa tsy olombelona.
Fampirantiana B: Sir Henry Irving
Ampidiro ny fitaomana lehibe faharoa amin'ny fiainan'i Stoker.
Tamin'ny 1878, i Stoker dia nokaramaina ho toy ny orinasa sy mpitantana orinasa ao amin'ny Lyceum Theatre fananan'i Irlande ary iasan'ny sasany fa ny mpilalao sarimihetsika malaza indrindra eran-tany, Sir Henry Irving. Lehilahy sahisahy, lehibe kokoa noho ny aina izay nitaky ny sain'ny manodidina azy, tsy fotoana akory talohan'ny nahatongavan'i Stoker ihany koa io toerana ambony io. Nampiditra an'i Stoker tao amin'ny fiarahamonina Londres izy, ary nametraka azy tamin'ny toerana hihaonana amin'ireo mpanoratra namany toa an'i Sir Arthur Conan Doyle.
Na eo aza ny fisalasalana momba ny toerana nakan'ny mpanoratra ny aingam-panahiny tamin'ny tantaran'i Dracula – Vlad Tepes na angano vampira Irlandey Abhartach – dia nifaneken'ny rehetra fa ny mpanoratra dia nametraka ny famaritana ara-batana an'i Irving sy ny sasany tamin'ireo lehilahy bebe kokoa… matanjaka… tetika mampiavaka ny olona.
Tamin'ny taratasy 2002 an'ny The American Historical Review mitondra ny lohateny hoe "" Buffalo Bill Meets Dracula: William F. Cody, Bram Stoker, and the Frontiers of racial Decay, " Louis Warren mpahay tantara no nanoratra:
Ny famaritana marobe nataon'i Stoker momba an'i Irving dia mifanitsy akaiky amin'ny fandikany ny isa noforonina izay nanehoan'ny mpiara-belona ny fitoviana. … Fa i Bram Stoker koa dia nampiditra ny tahotra sy ny fankahalana nomen'ny mpampiasa azy tao aminy, nahatonga azy ireo ho fototry ny fiction gothic-ny.
Tamin'ny 1906, herintaona taorian'ny nahafatesan'i Irving, Stoker dia namoaka tantaram-piainana roa an'ny lehilahy mitondra ny lohateny hoe Fahatsiarovana manokana an'i Henry Irving.
Zava-dehibe ny manamarika fa, na dia niasa tamin'ny teatra nandritra ny 27 taona teo ho eo aza izy dia nanomboka nanoratra fotsiny mba hanombohana Dracula tany amin'ny 1890 tany ho any. Ary ho lehilahy fahatelo io, izay toa toa nanosika ny mpanoratra hametraka penina amin'ny taratasy hanombohana ny tantara epic.
Fampirantiana C: Oscar Wilde
Ny mahaliana dia tamin'ny taona nanombohan'i Stoker niasa tao Irving tao amin'ny Lyceum Theatre dia nanambady an'i Florence Balcombe koa izy, hatsaran-tarehy malaza ary vehivavy iray mifandray Oscar Wilde.
Fantatr'i Stoker i Wilde tamin'ny taonany tao amin'ny oniversite, ary nanolo-kevitra ny mpiara-dia aminy aza izy ho mpikambana ao amin'ny Philosophical Society. Raha ny marina, izy roa lahy dia nanana fisakaizana akaiky, akaiky, ary mety ho bebe kokoa, nandritra ny roapolo taona, ary ny elanelana teo amin'izy ireo dia nanomboka nitombo ihany rehefa Voasambotry ny lalàna Sodomy tamin'izany andro izany i Wilde.
Ao amin'ny lahatsorany "'Desire Wilde iray took Me': The Homoerotic History of Dracula," Talia Schaffer dia nilaza izany:
Ny famafana am-pitandremana nataon'i Stoker ny anaran'i Wilde avy amin'ny lahatsoratra navoakany (sy tsy navoaka) dia manome ho an'ny mpamaky ny fahatsapana fa tsy nahalala ny fisian'i Wilde i Stoker. Tsy misy zavatra mety ho lavitra ny marina… Ny famongorana an'i Stoker dia azo vakiana tsy misy fahasarotana; mampiasa kaody azo ekena izy ireo, izay angamba noforonina mba hotapahina. Ao amin'ireo lahatsoratra madiodio momba an'i Wilde, i Stoker dia nameno ny banga izay tokony hisehoan'ny anaran'i Wilde miaraka amin'ny teny toy ny “degeneracy,” “reticence,” “discrution,” ary ny firesahana ny fisamboran'ny polisy ny mpanoratra. Dracula manadihady ny tahotra sy ny tebitebin'i Stoker amin'ny maha-lehilahy miray amin'ny lehilahy miray amin'ny lehilahy mandritra ny fotoam-pitsarana an'i Oscar Wilde. – Schaffer, Talia. "" Faniriana Wilde naka ahy ": The Homoerotic History of Dracula." ELH 61, tsia. 2 (1994): 381-425. Nampiasaina tamin'ny 9 Jona 2021.
Raha ny marina dia tao anatin'ny iray volana nisamborana an'i Wilde no nanomboka nanoratra i Stoker Dracula. Ity fifandraisana ity dia mahaliana hatrany ny manam-pahaizana maro izay nandalina ny tantaran'ny mpanoratra roa sy ny sanganasa navoakany.
Etsy ankilany, manana an'i Wilde ianao, izay nanoratra tantara iray momba ny tsy mety maty izay niaina ny fiainany teny an-kalamanjana, hohelohina ny vokany ary handray anjara amina hedonistana rehetra azony atao. Izy no ilay akoho mpandeha an-tongotra kanto niavaka izay nanintona ny maso rehetra ho eo aminy ary namihina azy.
Etsy ankilany, manana an'i Stoker ianao, izay nanoratra tantara momba ny tsy mety maty koa. Saingy, ny tsy fahafatesan'i Stoker dia noterena hiaina tamin'ny alina, niafina tany anaty alokaloka, katsentsitra namahana ny hafa ary tamin'ny farany dia "novonoina" ara-dalàna noho izany.
Tsy ilaina ny mitsambikina sary an-tsaina mihitsy ny mahita ireo zavaboary roa ireo ho toy ny fanehoana ny hasin'ny mpanoratra azy ireo. Nosamborina i Wilde, nogadraina ary natao sesitany taty aoriana satria nanao firaisana. Stoker dia tao anaty tokantrano marim-pototra - raha madio fitondran-tena ny ankamaroany izay nanohy ny ady hevitra fa ny "sodomita" dia tokony horoahina hiala ny moron'ny Great Britain sahala amin'ireo mpanao politika mihidy maro ankehitriny izay manohitra ny vondrom-piarahamonina LBGTQ +, ka tratra niaraka tamin'ny pataloha rehefa mieritreritra fa tsy misy mijery.
Mahavelom-bolo ihany koa ny manamarika fa samy maty i Wilde sy i Stoker noho ny fahasarotana avy amin'ny sifilis, STD mahazatra iray any Victorian London izay mahatsapa fa toa mijery bebe kokoa ny fifandraisan'izy ireo, fa sady tsy eto no tsy eo.
Tao amin'ny boky, Zavatra ao amin'ny rà: ny tantaran'ny Bram Stoker, ilay lehilahy nanoratra Dracula, David J. Skal dia nilaza fa ny specter an'i Wilde dia hita manerana ny pejin'ny Dracula, sahala amin'ny ohatry ny hafahafa nataon'i Wilde nihantona tamin'ny ain'ny Stoker manokana. Wilde dia aloky ny tenan'i Stoker. Izy no doppelganger izay sahy nanao izay tsy vitan'ilay rangahy na tsia.
Dracula an'ny Bram Stoker
Ny tolona anatiny an'i Stoker dia isaky ny pejy an'ny Dracula. Ny fiezahany hampifanaraka ny faniriana sy ny maha izy azy ary ny fahatsapana ny tsy fahatokisana ary eny, indraindray ny fankahalana tena napetraka taminy ary nampianarin'ny fiarahamonina iray izay nahatonga ny fanjanahana tsy ara-dalàna dia voasokitra ao amin'ny andalana rehetra.
Tsy mila manome famakiana an-tsoratra ny boky ny olona iray vao hahitana azy. Misy fotoana maro manerana ny tantara izay mitsambikina avy ao amin'ny pejy ny hafahafa, ny maha-hafa ary ny fanoharana.
Diniho ny faritanin'ny vampira noho Harker rehefa manatona azy ny Ampakarina. Manarona ny olombelona amin'ny vatany izy, ary mitaky azy. Sa angamba ny fifandraisana manjaka eo amin'ny Dracula sy i Renfield izay mahita ity farany tezitra noho ny faniriany hanompo?
Ny fiasan'ny vampirika mihitsy, ny famoahana ny ran'ny aina amin'ny alàlan'ny manaikitra, dia mitaky ny fidirana amin'ny firaisana ara-nofo ka na dia amin'ny fampifanarahana sarimihetsika voalohany indrindra amin'ilay tantara aza dia nomena toromarika sy mpanoratra fa ny Count dia afaka manaikitra ny vehivavy fotsiny mba hanala. tolo-kevitra momba ny pelaka na bisexualité.
Raha ny marina, nandritra ny vanim-potoana Hays Code, ny fomba tokana ahafahan'izy ireo miala amin'ny fampidirana an'io karazana io dia satria i Dracula no olon-dratsy ary nokasaina ho faty. Na eo aza izany dia azo zahana ny kaody sy ny soso-kevitra, fa tsy aseho azy mihitsy.
Mazava ho azy fa io dia nitarika ho an'ny mpandova horonantsary iray manontolo izay tsy namaky velively ny loharano loharano tany am-boalohany ary mety mbola tsy nahita ny fangirifiriana voajanahary amin'ny Dracula. Izy ireo no olona miseho amin'ny fizarana fanehoan-kevitra rehefa navoaka ny lahatsoratra toy izao ary manadino ireo mpanoratra, milaza fa nahavita an'ity lahatsoratra ity izahay, ary manandrana manery ireo lohahevitra LGBTQ + tsy misy izy ireo.
Raha ny zava-misy dia izany no antony tsy niresahako ny sarimihetsika hatreto. Ity fifanakalozan-kevitra ity dia miorim-paka ao amin'ny novela tany am-boalohany sy ilay lehilahy namorona azy: lehilahy iray izay azo inoana fa bisexual ary mety pelaka, mpanoratra iray izay nitolona tamin'ny maha izy azy sy ny faniriana izay namorona tantara tsy mety maty toa ny foto-keviny, ary lehilahy izay nanolo-tena ho an'ny lehilahy hafa nandritra ny androm-piainany tamin'ny fiainany vao naseho tamin'ny mazava tao anatin'ny telopolo taona lasa izay.
Tsy isalasalana fa nisy olona nijanona tsy namaky ity lahatsoratra ity aorian'ny andalana voalohany na roa – ny sasany tsy nahavita nihoatra ny lohateny akory. Ho an'ireo naharitra, izaho aloha dia misaotra. Manontany anao faharoa aho mba handinihanao ny fihetsikao manoloana an'ity vaovao ity alohan'ny hamalianao.
Mieritrereta alohan'ny hiantsoantsoanao hoe: “Iza no miraharaha?” Mazava ho azy fa mety tsy miraharaha anao izany. Mazava ho azy fa mety tsy misy dikany aminao mihitsy izany fampahalalana izany. Ny fahasahianao mieritreritra ny dikan'izany dia tsy misy ilana azy amin'ny olon-drehetra eto an-tany koa ilay fampahalalana.
Ny maha-anisan'ny vondrom-piarahamonina voahilikilika matetika dia midika fa ny tantarantsika dia simba na holavina amintsika. Ny olona tsy manana tantara dia toa tsy vahoaka velively. Voafehin'ny tsy fahampian'ny fampahalalana momba ny tenantsika isika, ary ireo izay tsy ao amin'ny fiarahamonina dia afaka mody mora foana fa mpiorina voajanahary vaovao isika izay nateraka tamin'ny taona 1970.
Noho izany, mety tsy misy dikany aminao izany, fa azo antoka fa misy dikany ho an'ny mpikambana ao amin'ny fiarahamonina LGBTQ + izay mpankafy mampihoron-koditra koa ny mahafantatra fa iray amin'ireo tantara mampihoron-koditra malaza indrindra tamin'ny fotoana rehetra dia nosoratan'ny lehilahy iray nizara ny tolona nataonay sy nitolona taminay miaraka amin'ny mombamomba azy amin'ny fomba ananan'ny maro amintsika.
Mendrika izany amin'ny 2021, ary izany no resaka hitohizan'ny volana Horror Pride Month.
Bram stockDraculaHenry IrvingVolana mirehareha mahatsiravinaHorohoro LGBTQOscar WildePrideWalt Whitman
Ny tranofiara 'The Darkness' dia milaza amin'ny NC-17, tantaram-pandrenesana vahoaka momba ny mpamosavy sy ny fiovana